Darpan Nepal – कानले कसरी सुन्छ आवाज ?
बाहिरी, मध्य र भित्री गरी कानका तीन भाग हुन्छन् । राम्रोसँग हेरचाह नहुँदा तीनवटै भागमा विभिन्न संक्रमण हुने गर्छ । बाहिरी कानको राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसके फ्रुङ्कोलोसिसजस्ता संक्रमण हुन्छ । मध्यकान अझ बढी संवेदनशील हुन्छ । जसमा आउने समस्यालाई ध्यान नदिए बहिरोसमेत बनाउन सक्छ । यी हुन् कानमा देखिने संक्रमण :
सुन्नका लागि मध्यकानमा तीनवटा हड्डी रहेका छन् । सबैभन्दा पहिलाको हाडलाई म्यालिअस, त्यसपछिकोलाई इन्कस र तेस्रोलाई स्टेपिज भनिन्छ । मान्छे बोल्दा कानको मध्यभाग र बाहिरी भाग थर्किनुपर्छ । आवाज कानमा ठोक्किएपछि जालीलाई चलायमान गराउँछ र तीनवटै हाड एकैसाथ चल्छ । यस्तो नभएको अवस्थामा आवाज सुन्न सकिँदैन, अर्थात् आवाज बाहिरै फर्कन्छ ।
बाहिरी कानमा प्रि–अरिकुलर साइनस (प्वाल) संक्रमण हुन सक्छ । यो जन्मजात समस्या पनि हो । कान र त्यसअन्तर्गतका निकायको उचित विकास हुन नसक्दा साइनस बन्ने गर्छ । जन्म हुँदा कानको नलीको उचित विकास नभएको अवस्थामा यस्तो समस्या देखिने हो । जसले बाहिरी कानमा प्वाल पनि पर्छ । यस्तो साइनसमा संक्रमण हुन गएमा बाहिरी कानमा पिप जम्मा हुन्छ । यस्तो समस्याले ज्वरो आउने, कान दुख्ने, फुल्नेजस्ता समस्या हुन्छन् ।
कानको मध्यभाग सुन्नका लागि निकै महत्वपूर्णा हुन्छ । यो भाग स्वस्थ हुन अतिआवश्यक हुन्छ । मध्यकानमा पनि विभिन्न संक्रमण हुने गर्छ । यस्तो संक्रणबारे बढी नै सचेत हुन आवश्यक छ । मध्यकानमा पिप भरिएमा बाहिर बोलेको आवाज रिफ्लेक्स भएर फर्कन्छ । जति पिप भरियो त्यति सुन्ने शक्तिमा ह्रास आउन थाल्छ ।
यदि समयमै उपचार नगरेको अवस्थामा जालीमा प्वाल पार्ने, हाडमा समस्या आउने हुन सक्छ । कानको हाडमा घाउ हुनु भनेको निकै जटिल समस्या हो ।
यस्तो अवस्थामा अत्यधिक दुख्ने, ज्वरो आउने हुन्छ । त्यस्तै, कानको जालीमा प्वाल भएमा अप्रेसनका माध्यमबाट जाली बनाउनुपर्छ । हाडमा समस्या भएमा ठूलो अप्रेसन गर्नुपर्छ ।
भित्री कानको संक्रमण
भित्री कानमा विभिन्न समस्या आउन सक्छ । यस्तो कानमा समस्या आएमा कम सुन्ने, रिंगटा लाग्नेजस्ता अवस्था निम्तिन्छ । एक्युट लेब्रिन्थाइटिस, मिनियर्स डिजिज, अटो टक्सिसिटीका कारण यो भागमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । चोटपटकले पनि कान फ्याक्चर अफ टेम्पोरल बुन पनि हुन्छ, जुन समस्या हो ।
Previous Postथाइराइडका रोगीले कहिल्यै नगर्नुहोस् यी पाँच कुराको सेवन Next Postक्यान्सरको उपचार कति महंगो ? जोगिन के गर्ने ?